Home Wararka Ka qaybgalayaasha Mudaharaadka oo ku sii qulqulayo goobta iyo qabanqaabadiisa oo si...
Ka qaybgalayaasha Mudaharaadka oo ku sii qulqulayo goobta iyo qabanqaabadiisa oo si fiican u socoto
Waxaa si xoowli ah ku socda qaban-qaabadii ugu danbeeysay ee mudaharaadka maanta loogu balansan yahay. Waxaa la arkayaa dad xeeyn xeeyn ah oo ku sii socda goobta uu mudaharaadka ka dhacayo.
Waxaa la diyaariyay boorarkii la qaadan lahaa, cod-tabayiyaal (Microphones) iyo qoraaldaii loo qayb lahaa saxaafadda. Waxa ay durbadii bilaabay wakaalada wararka ee caalamiga ah in ay tabiyaan mudaharaadka.
Hadii aad donaysid in ad ka qaybgasho mudaaharaadka iyo meelaha aad salaada ku tukan karto waxaad dalacataa qoraalka ku lifaqan qormadaan: